Madaxda Jaamacadda Jamhuuriya oo heshiisyo sare u qaadida tacliinta sare la galay Jaamacado caalami ah “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolojiyada (JUST) ayaa heshiis ku saabsan horumarina tacliinta sare ee dalka iyo mid iskaashi oo dhinacyo badan taabanaya la yeelatay Jaamacado Caalami ah oo ku yaalla dalal dhowr ah, taasi oo qeyb ka qaadan karta sare u qaadida tacliinta sare.
Guddoomiyaha Jaamcadda Jamhuuriya Eng. Maxamuud Axmed Jimcale, iyo guddoomiye kuxigeenka dhinaca cilmibaarista iyo horumarinta Prof, Cadiwahaab Cabdullaahi Cilmi, oo safar shaqo ku tegay dalka Uganda intii u dhaxaysay 08-16 bishan Maarso ayaa heshiisyo caalami ah la soo saxiixday dhowr Jaamacadood.
Madaxda Jaamacadda JUST ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Uganda waxa ay casharro dhiirro gelin iyo aqoon kororsi u jeediyeen qaarka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax kabarta Jaamacadaha ku yaalla magaalada Kampala.
Maamulka sare ee Jaamacadda Jamhuuriya ee culuumta iyo tiknoolojiyada (JUST) ayaa Jaamacadaha ay heshiiska la galeen waxaa ka mid ah:
(1)	Jaamacadda UTAMU (Ugandan Technology and Management University), oo laga leeyahay dalka Ugandha.
(2)	Jaamacadda Sikkim Manipal University (SMU) oo xarunteedu tahay dalka India, gaar ahaan qeybteeda Bariga Africa oo loo yaqaanno ISBAT (International School of Business and Technology).
(3)	Jaamacadda University Of Johannesburg (UJ), oo ka mid ah Jaamcadaha ugu waa weyn ee dalka Koonfur Afrika.